Magweta eInternational Criminal muNetherlands - Law & More
Izvo zvinogona zvakare kuitika kuti iwe unosangana nemutemo wematsotsi kubva kune iye 'akabatwa' maonero. Mazuva ano tinoita kutenga kwakawanda kuburikidza neinternet. Kazhinji zvese zvinofamba mushe uye iwe unowana izvo zvawakaraira. Nehurombo, dzimwe nguva zvinofamba zvisirizvo: iwe wakabhadhara mari yakawanda kune zvimwe zvinhu zvakaita sefoni kana laptop, asi mutengesi haana kumbobvira aendesa zvinhu uye haasi kutarisira kuzviita. Mushure mezvose, kana iwe uchida kuzivisa kuti zvinhu zvako zviripi, mutengesi hapana kwaanowanikwa. Muchiitiko ichocho unogona kuve nyajambwa wekubiridzirwa kwematsotsi.
Mune mamiriro ezvinhu umo iwe unosangana netsaona yemutemo wetsotsi, zvinokurudzirwa kuti ubate nyanzvi yegweta Law & More. Chero chiitiko mumamiriro ezvemitemo yematsotsi chinogona kunge chakanyanya uye zviito mukutongwa kwemhosva zvinoteedzana nekukurumidza. At Law & More isu tinonzwisisa kuti mutemo wematsotsi zviito zvinogona kukanganisa hupenyu hwako uye ndosaka tichifunga nezvekugadzirisa dambudziko remutengi nekukurumidza uye nemazvo. Magweta ematsotsi pa Law & More vanofara kukupa rubatsiro rwemutemo munzvimbo dze:
Uri kupomerwa mhosva yekubiridzira here?
Unoisa panjodzi nyaya dzemutemo dzemakambani?
Kutanga kuenderera zviri pamutemo
Mune mamwe mamiriro ezvinhu iwe unganzwe wakakwenenzverwa, semuenzaniso kana watenga zvinhu pa internet, wakabhadhara mari yakawanda uye hauna kumbozvigamuchira, kana zvisiri pamutemo zvetsotsi. Kuti ukwanise kutaura kuti scam ndeye tsotsi mupfungwa yepamutemo, panofanirwa kunge paine zvisiri zvechokwadi kana kunyepa zvinoshandiswa nemutengesi kutengesa chimwe chinhu. Scam inotsanangurwa zviri pamutemo sekutamisa mumwe munhu kuti aunze mari uye zvinhu, pasina chinangwa chekuendesa chero chinhu mukudzoka. Tinoda kuziva kuti chii chatinogona kukuitira? Bata magweta edu. Law & MoreMagweta ane maitiro avo uye vanogona kuongorora mamiriro ako uye nesarudzo dzako.